Momba anay | Fujian Anxi Flyingspark Crafts Co., Ltd.
Ny ekipanay dia misy ampahany roa amin'ny sehatry ny famokarana ny singa mivarotra. Misy olona mihoatra ny 100 mivoaka ao amin'ny orinasanay. Hatramin'ny nananganana ny ekipanay dia nanolo-tena izahay hanangana singa mamiratra hamaly ny fitakian'ny tsena.
Manasa anao tamim-pahatsorana amin'ny orinasanay izahay hiaina ny fironana sy ny endrika vaovao indrindra, manana fironana hanome lahatsoratra kanto sy farany amin'ny kalitao avo indrindra izahay amin'ny vidiny mirary indrindra ho an'ny mpanjifanay.
Ny fizotry ny vokatra iray manontolo dia ao anaty rivo-piainana milamina ary mahazo aingam-panahy amin'ny vokatra mahasarika isan-karazany avy amin'ny karazana lohahevitra ary koa ny lahatsoratra fararano sy x-mas 'mahazatra.
Ny mpiasa matihanina dia faly manampy anao.
Manantena ny fitsidihanao izahay.
Ny ekipanao FLYINGSPARKS
FUJIAN ANXI FLYINGSPARKS CRAFTS CO., LTD dia any Anxi Town, faritanin'i Fujian, Sina. Misy atrikasa fifanarahana miisa 30 mahery, mahatratra 6000 metatra toradroa ny velarany.
Izahay dia matihanina mpanamboatra ny asa tanana vy, haingon-trano zavatra, kojakoja an-trano sy lahatsoratra miaraka amin'ny mpanjifa. Ny orinasanay amin'ny maha mpanamboatra matihanina azy dia fetsy amin'ny famolavolana lamaody, amin'ny fampandrosoana ary amin'ny famokarana. Mifantoka amin'ny andiana kojakoja lamaody izahay. Azontsika atao ny mamolavola asa tanana malaza an'arivony mahery isan-taona, vita amin'ny vy, fantsom-by, hazo, ratana ary karazana fitaovana maoderina izy ireo. Ny entana maroloko dia malaza any Amerika, Eropa, Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa noho ny antony ananantsika vidiny lafo sy fandefasana ara-potoana. Mino izahay fa ny orinasanay no safidinao tsara indrindra.